Waxay doonayeen dimuqraadiyad. Taabadalkeed waxay yiraahdaan booliska ayaa garaacay oo kufsaday. - Wardeeq 24 TV Waxay doonayeen dimuqraadiyad. Taabadalkeed waxay yiraahdaan booliska ayaa garaacay oo kufsaday. Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Waxay doonayeen dimuqraadiyad. Taabadalkeed waxay yiraahdaan booliska ayaa garaacay oo kufsaday.
Waxay doonayeen dimuqraadiyad. Taabadalkeed waxay yiraahdaan booliska ayaa garaacay oo kufsaday.
Sergei – oo weydiistey wardeeq news in uusan shaaca ka qaadin faahfaahinta sheekadiisa iyo aqoonsigiisa dhabta ah – wuxuu hadda dalbaday magangalyo dal kale, wuxuuna doonayey inuu sheekadiisa la wadaago wardeeq news si ehelka uu ka tegey ay mar uun u aqriyaan wixii haystay ku dhacay isaga.
“Waxaan uga soo tagay wadankeyga, asxaabteyda iyo qoyskeyga, qadhaadhka guuldarada,” ayuu yidhi. “Waxaan si fudud qaxooti ku noqday oo aan bilaabay inaan dib u bilaabo, sidii in wixii aan soo qabtay oo dhan sanado aan si lama filaan ah waxba u ahayn. Ilaa maantadan la joogo, maskaxdaydu way daalan tahay, hurdo la’aanna waan ka qabaa dadka ku haray.”
wardeeq news waxay lahadashay dhowr qof oo kale oo reer Belarusiyiin ah oo ka cararay cabudhinta nidaamka Lukashenko, iyagoo si sharci daro ah uga gudbay xadka Ukraine, iyadoo qeyb ka ah baaritaan labo bilood socday oo ku saabsan rabshadaha ka socda gudaha wadanka. Daraasiin wareysiyo ah, dibadbaxayaasha iyo dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka waxay ka hadleen jirdil – laga bilaabo garaacis nidaamsan, ilaa kufsi budhadh booliis.
Kuwa ka goostay ciidanka booliska ayaa sidoo kale wardeeq news siiyay fiidiyowyo laga soo qaaday kaydka booliiska – kamaradaha jirka, dashcam iyo muuqaalada ilaalada – oo muujinaya rabshadaha aan caadiga ahayn ee booliska rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha aan hubeysneyn oo nabada ah, inbadan oo ka mid ah dhalinyarada.
Previous articleXaqiiqooyinku waxay taageeraan ‘dacwadaha fidnada ee rabshadaha rabshadaha wata ee US Capitol: Rasmi
Next articleDiblomaasiyiin ayaa loo diiday inay booqdaan iyadoo Michael Kovrig Canadian ah maxkamad lagu saarayo Shiinaha